Ebube ala na aji nke oke rabbits: nkọwa na foto - Anumanu - 2020
Ụdị nkịta ọhịa: aji na ala (na foto na aha)
Taa, e nwere ọtụtụ ụdị rabbits. A na-ekewa ha niile nke ọma site n'ịdị na-arụ ọrụ ha, ogologo oge na ibu. Ya mere, dịka ọkwa nke a nabatara, a na-ekewa ha, anụ, aji, na ụdị ezumike nke ezumike maka ịzụlite ụlọ.
Ụdị ezé nke rabbits
Black aja aja
Russian ermine (Himalayan)
Ụdị oke rabbits
Ngwurugwu nke oke oyi bụ ihe dị mma maka ụfọdụ ụlọ ọrụ. Site n'ile ya anya, enwere ike iji ya tụnyere atụrụ ma ọ bụ ewu. Ke adianade do, e nwere nghọta na oke bekee nwere ọgwụgwọ ihe onwunwe ma dị oké mkpa maka neuralgia na radiculitis. Ihe arụ nke rabbits dị ala bụ n'ihi ihe ndị dị ka nri, ebe obibi, afọ, oge, na teknụzụ maka ịnakọta mmụba.
Ị ma? A na-ewere China dịka onye ndu ụwa na mmepụta nke angora. Na Europe, France na-edu, na nke abụọ na nke atọ bụ Czech Republic na Slovakia.
Ejiri a na-ama aha ya maka ịdị mma nke ajị na ajị nke ewu nke otu aha ahụ. E nwere echiche na a na-ebute feathers Angora na Europe site na ụsọ Turkey ma ghọọ ndị ọkachamara nke ndị ọgaranya. Ndị a magburu onwe ya dị ka bọmbụ na-acha ụfụ na taa bụ ihe jikọrọ ya na ọrụ anu ulo.
Ibu arọ nke onye na-eto eto bụ 3 n'arọ. Ụmụ nwanyị adịghị iche na mkpụrụ - na nkezi, 6 na-eto eto rabbits kwa okol. Ụmụaka na-eto nwayọ na uru kilogram abụọ na-enweta naanị ọkara otu afọ.
Na ọnọdụ ndụ nke rabbits Angora dị ala, dị ka n'efu, ụlọ akọrọ. Tụkwasị na nke a, nke a na-achọ mgbe niile (kwa ọnwa 3) ịkpụ ntutu.
A na-emepụta ụdị ihe a na narị afọ gara aga site na nchịkọta nke ụdị ndị Angora.
Nkume uhie - kama oke rabbits, ruo 54 cm n'ogologo. Ọnụ arọ nke anụmanụ tozuru okè dị kilogram 4. Isi - agba gburugburu, okpo, na isi ya na nti. Paws - dị ike, mkpụmkpụ.
Ogologo ogologo, ihe dị ka 15 cm, na-agbanwe, anaghị akwagharị.
Nne na-enye ihe dị ka ụmụaka 7 site na mkpụrụ.
White down - undemanding crawl, na-emeghere nnọọ n'ógbè anyị.
Chọpụta ma ọ dị mma ka rabbits rie hay, burdocks, nettles.
Enwere ọtụtụ ụdị nke rabbits, ha na-ekewa n'ime:
Ndị nnọchiteanya nke aji aji na-edozi akpụkpọ ụkwụ na-acha ọcha, na-eji ejiji kwesịrị ekwesị na ya na-enweta ezigbo aji ngwaahịa. Ma ihe ndị bụ isi, nke ndị ọrụ ozuzu na-arụ ọrụ, bụ ezigbo àgwà aji, aji na mkpochasị nke ịkụ ihe.
Ihe kacha mma na, ma eleghị anya, ụdị kacha mmabred na usoro nke hybridization nke Viennese acha anụnụ anụnụ, nnukwu ibu na flandre.
Ụja a na-ahụkarị site na agba ya na-adịghị ahụkebe, yiri nke nkịta ọhịa (ụfụ ọhịa ojii). Mkpa na aji nke ajị anụ a na-eburu ụzọ. Ogo nke onye okenye na-anọchite anya obere ego na-acha odo odo na-ebute 5-7 kg. Isi ya dị ike, ya na nti ntị ogologo (ruo 18 cm). Ahụ dị oke, ihe dị ka 61 cm n'ogologo, obi dị oke, ihe dị ka 37 cm na mkpuchi. Akwụsị ụkwụ dị oke, ogologo.
Akpụkpọ anụ nke ụdị a na-enwe mmasị karịsịa site n'aka ndị na-emepụta ngwaahịa ajile na-achọpụta ngwa ngwa na ụlọ ọrụ ahụ n'ụdị ya. Ọpụpụ - 8 ma ọ bụ karịa rabbits kwa-awụba n'oké osimiri.
Na-agụkwa banyere udiri nke rabbits: California, isi awọ, rizen, ebulu.
A na-eri nri ala a n'agbata narị afọ nke 20 na-adabere n'ụdị ụdị dị ka chinchilla, nnukwu ibu, ụlọ flandre, na-acha anụnụ anụnụ Vienna. Agba isi bụ isi awọ, n'etiti nke a na-enwe njedebe nke nche na ntụrụndụ na-adọrọ adọrọ nke na-emepụta ụkpụrụ nke veel.
Pooh skins - evenly acha anụnụ anụnụ. Ụdị ịdị arọ nke nchara ọlaọcha bụ 4.5-4.8 kg. Ogologo oge - 60 cm. Ara dị ike, 37 cm n'obosara.
A na-eme ka eriri akpụkpọ anụ na-acha uhie uhie, dịka nke anụ ọhịa na-acha ọcha nke rabbits, dị iche iche site na mmalite nke mmalite. Rabbits na-apụta n'ìhè nke nwa ma nweta ụdị dị iche site na ọnwa 7 ruo nke abụọ molt.
Nke a na-egosi oke rabbit si England ma buru ụzọ chee na ejiji. Otú ọ dị, ka oge na-aga, ndị nnọchianya jikọtara na rabbits nke ụdị anụ Flandre na Viennese na-acha anụnụ anụnụ ma malite ịmalite maka akpụkpọ ha. Ndị nnọchiteanya nke ndị okenye nwere ụkpụrụ iwu kọmpat (56-58 cm) na obere isi. Obere obere (13-15 cm), guzobe. Ọnyà nwere ọtụtụ azụ na obi, ogologo ụkwụ. Akpụkpụ ahụ dị ike, ya na ọkpọ dị mma.
Ugbo ahụ anaghị adị ogologo oge. Agba ọcha na-achịkwa agba. Dị ka ụdị pụrụ iche - ọnụnọ nke specks ojii-agba aja, olu ojii, ntị, imi na ụtarị n'etiti etiti azụ.
Ọ dị mkpa! Ụdị ebe ahụ adịghị agbanwe.
Ọnụ ọgụgụ onye nnọchiteanya okenye bụ 4.5-5 n'arọ. Ụmụ nwanyị maka mkpụrụ na-enye ụmụ ehi asatọ.
Akwukwo oke ubochi a na-aju uba, na-agbanye aka na ikpo oku. A na-akpọ Rex dị ka onye na-adịghị ahụ ntutu isi. Natara na France. Akpụkpọ anụ dị iche:
acha anụnụ anụnụ;
Ọ dị mkpa! Rex na-ebute ụda na-adabaghị adaba na mkpọtụ, ụda dara ụda, adịghị anabata nnukwu aromas na akwa okpomọkụ.
Ụmụ nwanyị anaghị emepụta nri (5-6 ụmụ rabbits), ụmụ ọhụrụ na-eto nwayọ. Ke adianade do, obere rabbits enweghị ike ịdọrọ drafts, ájá, mmiri mmiri na-erugharị, na-ekpuchi ọkụ n'emeghe anyanwụ. Site na ọdịdị nke Rex, dị mma, dị jụụ, na-atọ ụtọ nke ukwuu na mmasị.
Anyị na-adụ gị ọdụ ka ị gụọ banyere otu esi etinye ụlọ maka oke bekee ma kwadebe ya na ihe a na-awụfu na onye na-eri nri, nakwa banyere ihe a wụsara, otú e si edebe rabbits n'ime ya na otu esi eme onwe gị.
Ọ bụ ezie na a na-ekwu ụdị ọmụmụ a dị ka aji rabbit ma ọ bụ ala ma ịzụlite nwere naanị otu ihe mgbaru ọsọ - akpụkpọ anụ, ha na-ejikwa anụ mara mma. Aha nke ìgwè ahụ bụ n'ihi ọdịdị nke agba na ajị ermine. Isi ụda dị ọcha, ọ bụkwa naanị na nsọtụ imi, ntị na nkwonkwo e nwere agba aja gbara ọchịchịrị ma ọ bụ agba ojii.
Ulo nke rabbit rabbin Russia dị iche na-egbuke egbuke, njupụta na velvety. Umu uhie Russia bu ihe di ike nke oma, obere isi na okpo aru 50-52 cm.
Ndị tozuru okè rabbits ju 4-4.5 n'arọ. Azu a na-ama oke site na nkwenye na ezi mgbanwe maka ọnọdụ ihu igwe dị iche iche.
Ị ma? Bekee rabbit aha ya bụ Ralph mere ka ọ bụrụ onye mmeri nke Guinness Book of Records: eared ruru kilogram 25 na ogologo 130 cm.
Adult chinchilla dị iche iche tubular udi nke ahụ. Isi ya na nti ya dị ntakịrị, obi ya dị egwu ma dị omimi. Olu dị mkpụmkpụ, dị ike. Ejiri chinchilla acha agba odo-acha anụnụ anụnụ, mana njupụta, agba nke agba bụ ìhè, mgbe niile na ọchịchịrị chinchilla.
Ọ dị mkpa! Ọdịdị akpụkpọ ahụ e debere na "ntinye", nke a nwetara site na ịpịpụta ikpo. Ihe doro anya na zonality (isi awọ, ọcha, nwa), mma àgwà ahụ.
Ụkpụrụ ruru eru nke oke rabbits bụ 4.5 kilo. Rabbits na-enye mkpụrụ nke ụmụ - 6-8 pups. Ọ bụghị ihe ọjọọ ọnọdụ ihu igwe dịgasị iche.
Mụta otu esi emeso oke bekee maka ọrịa: myxomatosis, coccidiosis, pasteurellosis.
N'ezie, nke a, ọ bụghị ụdị nile nke ajị anụ na ala rabbits. E nwekwara oke umu anumanu di iche iche, nke a na-edozi anya, nke a ga-eji bred na anu ndi anu ulo. Ma anyị gbalịrị ịkọwa ndị kachasị ma ama.